လေယာဉ်ခရီးစဉ် 1.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.7 လြန္ခဲ့ေသာ9လက
Application မ်ား ခရီးသြားျခင္း & ေဒသဆိုင္ရာ လေယာဉ်ခရီးစဉ်
လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာလေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်ရောင်းများအတွက်ဦးဆောင်အေဂျင်စီများ၏အခြေစိုက်စခန်းပတ်ပတ်လည်စျေးပေါပျံသန်းမှုများအတွက်ရှာဖွေဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကြိုတင်မှာယူမှုများနှင့်ငွေပေးချေမှုမဆိုအပိုဆောင်းတာဝန်ခံသို့မဟုတ်အခကြေးငွေမပါဘဲ၎င်းတို့၏စျေးနှုန်းများများအတွက်အေဂျင်စီများ၏ site ကိုမှမိုဘိုင်းကိရိယာမှတိုက်ရိုက်ထုတ်သယ်ဆောင်ပျံသန်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ရှာရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကို အသုံးပြု. စျေးပေါပျံသန်းမှုစာအုပ်ဆိုင်:
1. အခမဲ့ Application "လေယာဉ်ခရီးစဉ်" Install လုပ်ပြီးဖွင့်ပါ။ လျှောက်လွှာဘာသာစကားအလိုအလျှောက်သင့်မိုဘိုင်း device ကို၏ဘာသာစကားကို setting များကိုအညီရွေးချယ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။
2. လမ်းကြောင်း, ရက်စွဲ, ခရီးသည်အရေအတွက်ကို select နဲ့ "လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ရှာဖွေရေးကိုကလစ်နှိပ်ပါ"။ app ကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဈေးအပေါဆုံးလက်မှတ်တွေနဲ့အတူစတင်ရလဒ် sort နှင့်စာရင်းထဲတွင်သူတို့ကိုပေး, လေကြောင်းလိုင်းလက်မှတ်ရောင်းများအတွက်ဦးဆောင်အေဂျင်စီအခြေခံ scan ပါလိမ့်မယ်။
3. သင်ကိုက်ညီသောလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီး click နှိပ်ပြီး "Buy Ticket" သငျသညျအဘယ်သူ၏လေယာဉ်လက်မှတ်သင်တို့ကိုရွေးကောက်သထားသောအေဂျင်စီမှ redirected လိမ့်မည်။
4. စာအုပ်နှင့်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ် (အေဂျင်စီ) ရက်နေ့တွင်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်အွန်လိုင်းရွေးချယ်ထားလက်မှတ်တွေပေးဆောင်။ ငွေပေးချေမှုပြီးနောက်သင် e-လက်မှတ်ခရီးစဉ်လက်ခံရရှိအတူရောင်းချသူထံမှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
5. အဆိုပါလဲလှယ်နှင့်ဆက်စပ်သောကိစ္စများဖြေရှင်းရန်ဒါပေါ်မှာလေယာဉ်လက်မှတ်များ, လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေး, အိတ်ကိုအခကြေးငွေ, ထိုလက်မှတ်အပေါ်အမှား correction နှင့်ပြန်လာခြင်း, ဘွတ်ကင်အတည်ပြုချက်ကိုအတွက်ရရှိသောရောင်းချသူအသေးစိတ်အချက်အလက် (ဖုန်းနံပါတ်, အီးမေးလ်လိပ်စာ), ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမှတဆင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် သင်လက်မှတ်ဝယ်ရာမှအေဂျင်စီရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရုံးခန်း။
နောက်တကြိမ်: က "Buy Ticket" ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, သင်သည်သူ၏စျေးနှုန်းများများအတွက်လေယာဉ်လက်မှတ်ပေါ်တွင်ဘွတ်ကင်များနှင့်ငွေပေးချေမှုများအတွက်တိုက်ရိုက်ရောင်းချသူ (အေဂျင်စီ) ကို redirected လိမ့်မည်။ တာဝန်ခံသင်လုံးဝအခမဲ့ဘို့ငါတို့ရှာဖွေရေး။ ကျွန်ုပ်တို့သာသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြမှစျေးပေါသောလေယာဉ်ရှာဖွေနေနေကြတယ်, လက်မှတ်တွေရောင်းပါဘူး, နှင့်ကိုဝယ်ခြင်းငှါအဘယ်သူကိုမှာဘယ်လိုလေယာဉ်လက်မှတ်အဘို့အဆပ်ဖို့, သင်ဆုံးဖြတ်ရ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုအတူသင်တို့ရှိသမျှခရီးစဉ်နှစ်ခုလုံးကိုပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာခရီးသည်လေကြောင်းလိုင်းများဖို့အကောင်းဆုံးပျံသန်းမှုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ "လေယာဉ်ခရီးစဉ်" လျှောက်လွှာ၏အားသာချက်များ:
- လက်မှတ်ဘွတ်ကင်များနှင့်ငွေပေးချေမှုကိုမှန်ကန်အချိန်အတွက်ကုန်သည်ရဲ့ဆိုဒ် (အေဂျင်စီ) ကိုမိုဘိုင်း device မှတိုက်ရိုက်ဖန်ဆင်းထားသည်,
- filter များနှင့်အမြိုးမြိုးကိုအသုံးပြုခြင်း အများဆုံးအမြတ်အစွန်းခရီးကိုရှာဖွေရမည့်အချိန်ကိုလျှော့ချပါလိမ့်မယ်,
အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်လေကြောင်းလိုင်းများဘို့ငါတို့ရှာဖွေရေးချိတ်ဆက်ထားပြီးသငျသညျပိုလျှံအိတ်ကိုနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့အပေါ် optional ကို extras ခြင်းမရှိဘဲ, လျော့နည်းသက်သာခြင်းနှင့်ပျံသန်းဖို့ဆန္ဒရှိလျှင်, သင်စျေးအသက်သာဆုံးလေယာဉ်လက်မှတ်ကိုဆက်ကပ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျပျံသန်းမှု၏အစောပိုင်းဘွတ်ကင်အဘို့ကယ်တင်အဖြစ်ရှိပြန်လက်မှတ်များဝယ်ယူလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုနှင့်အတူသငျသညျ, လေကြောင်းလိုင်းများ, အစားထိုး၏နံပါတ်နှင့်သက်သာခြင်းအမျိုးမျိုးဒီဂရီအားဖြင့် operated ပျံသန်းမသာကုန်ကျမှာအများဆုံးအဆင်ပြေလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်, ဒါပေမယ့်လည်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ "လေယာဉ်ခရီးစဉ်" app ကို install နှင့်အများဆုံးအကျိုးရှိသောခရီးစဉ်များအတွက်ရှာဖွေစတင်ဖို့။
လေယာဉ်ခရီးစဉ် အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
လေယာဉ်ခရီးစဉ် အား အခ်က္ျပပါ
flightsshop စတိုး0206
လေယာဉ်ခရီးစဉ် ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း လေယာဉ်ခရီးစဉ် အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Coral Dev
App Name: လေယာဉ်ခရီးစဉ်
လက်မှတ် SHA1: 62:A0:FD:4C:85:B4:2A:AA:A0:0C:71:95:C1:95:4E:3A:59:4B:07:62
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Evgeniy Filin
လေယာဉ်ခရီးစဉ် APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ